Wafdi ka socda Ireland oo booqasho ku tagey Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Wafdi ka socda Ireland oo booqasho ku tagey Muqdisho
Rooble iyo Wasiirka ayaa kulan gaar ah ku yeeshay Villa Somalia, iyagoo kawada hadlay arrimo dhowr ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Gaashaandhigga iyo Arrimaha Dibadda Jamhuuriyadda Ireland Simon Coveney, ayaa Maanta oo Khamiis ah booqasho ku tagey magaaladda Muqdisho, iyadoo ay safarkiisa noqonayo midkii ugu horeeyay oo Mas'uul ka socda dalkan ku yimaado Soomaaliya.
Wasiir ka socda Ireland waxaa Garoonka kusoo dhaweeyay Garoonka dhigiisa Soomaaliya Xasan Xuseen, isagoo loo galbiyay Villa Somalia, halkaasoo uu kulan kula qaatay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
"Kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga iyo xoojinta xariirka ladabada dowladood iyo joogteynta taageerada Midowga Yurub ee Ireland xubinta ka tahay, arrimaha doorashooyinka, taageerada amniga iyo Tageerada arragtida Soomaaliya ee ku aaddan dib u eegista Ciidanka AMISOM, Dib u eegista Xayiraadda Hubka ee muddada dheer saaran Soomaaliya, maadaama ay xubin ka yihiin golaha amniga ee Qaramada Midoobay," ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska Rooble.
Ireland waxay kamid tahay xubnaha Gollaha Amaanka ee QM, waxayna xubin ka tahay sidoo kale gudiga la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, taasoo sidii loo qaadi lahaa Rooble kala hadlay Wasiirka.
Dowladda Soomaaliya ayaa wado dedaallo ay ku raadinayso taageero dhaqaale, si ay ugu fududeyso doorashooyinka dalka, oo la filayo inay billowdaan 25-ka bishan, iyadoo ay jiraan caqbado dhowr ah, sida muranka kuraasta Somaliland.